अब विद्यालयका कक्षा पनि जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गरिने, यस्तो आयो निर्णय ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Educational News/अब विद्यालयका कक्षा पनि जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गरिने, यस्तो आयो निर्णय !
ओखलढुंगा । लामो समयको लकडाउन र सरकारी निषेधाज्ञाका कारण बन्द रहेको नेपालका विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन् ।सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न सुरक्षा मापदण्ड र शिक्षण विधको प्रयोग गर्ने विभिन्न विकल्पसहित अधिकार दिएपछि स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन शुरु गरेका हुन् ।
ओखलढुंगाका स्थानीय तहले क्वारेन्टिन हटाएर विद्यालय सञ्चालन शुरु गरेका छन् । संघीय सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गर्दै स्थानीय तहलाई विभिन्न विकल्पमा शिक्षण सिकाइ सुरु गर्न अधिकार दिएपछि स्थानीय तह विद्यालय सञ्चालनमा जुटेका हुन् । निर्देशिका पालना गरेर जिल्लाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका विद्यालयमा पढाइ शुरु गरेको छ ।
दुई विद्यालयमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिन विस्थापन गरेर विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन सुरु गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले बताउनुभयो । दुर्गम गाउँका विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सम्भव नरहेकाले भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयले दुरी कायम तथा व्यवस्थापन गरेर विद्यालय सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै लिखु गाउँपालिकाले पनि पठन पाठन शुरु गरेको छ । भौतिक दुरी कायम गरेरै थोरै विषय पढाएर कक्षा शुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । लिखु गाउँपालिका–८ को जालपा माविबाट कक्षा शुरु भएको छ ।